Cyclamen Mix: varieties "Patio" sy "Mini", indrindra ny fikarakarana ao an-trano, ny firoborobon'ny fambolena - Famokarana voankazo - 2019
Famafazana voan-kafe "Cyclamen Mix": karazana malaza, fomba famolavolana azy ireo ary fikarakarana zavamaniry
Tsy mora ny fiovan'ny sikam-piaramanidina ao an-trano, na izany aza, miaraka amin'ny fisian'ny karazana sy hybrids vaovao, mihena ny fahasarotana. Ny hybrida dia tsy mahazatra, ny fikarakarana azy ireo dia tsotra sy mora.
Ny hybrides vaovao dia ahitana karazana bisikileta kely, izay mamorona mozika mahavariana. Ny famokarana siklaôla dia tsy fahasamihafana samihafa, fa marika marika izay ahazoana tsiranoka amin'ny famokarana sikilamana, araka ny fitsipika, ny habeny kely.
Aiza ary ny fomba hambolena?
Lighting sy toerana
Ny fangatahana tany
Poinsettia na kintana Krismasy
Hatsikana bika na hiondoks
Ny Cyclamen dia heverina ho teraka ny morontsirak'i Mediterane. Ny voninkazo voalohany nambolena tamin'ny andro fahiny dia avy amin'ireo zavamaniry hita tany Sipra sy Gresy.
Tany Eoropa, nanjary nalaza tamin'ny faran'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ny cyclamens, ary hatramin'izay fotoana izay, maro ireo karazana sy hybrides tany am-boalohany no nentina teto amin'izao tontolo izao. Ny toerana mitarika amin'ny fifidianana sambasma androany dia tarihin'ny orinasa mpamokatra voninkazo any Holandy, Alemana, Italia ary Frantsa. Tao amin'ny laboratoara no nahitana ireo hybrida kely izay samy hafa amin'ny endrika sy ny lokon'ny voninkazo sy ny ravina.
Ho an'ny famokarana siklamena, dia voafaritra matetika ny zavamaniry avy amin'ny sambokely persiana., misy voninkazo lehibe sy kirihitra tsy misy dikany. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Rehefa mividy izany dia ilaina ny manazava hoe karazana voninkazo no fototry ny fitomboan'ny voninkazo.
Ny herin'ny sifotra dia maharitra ela. Manana:
kely lavalava, rantsantanana, tuberous tuberous, mitombo hatramin'ny diamaty 15 cm, mitovitovy amin'ny fotodrafitrasa eo amin'ny "ambany", tsy mamorona tovovavy (afa-tsy Eoropeana);
fototra, hoditra, matevina, lehibe (hatramin'ny 14 cm), ravinkazo mavo-manga amin'ny endriky ny fo na ela loatra;
eo amin'ny lafiny ivelany amin'ny takela-takelaka dia rakotra manga volom-bolamena na volomparasy somary volom-bolamena, manome ny zavamaniry fanampiny decorativeness;
Amin'ny karazana Eoropeana, ny ilany ambany dia misy volomparasy;
Ny vatosoa marevaka, matevina, mavokely-mavokely dia maniry mivantana avy amin'ny tuber;
voninkazo amin'ny endriky ny lolozy (3-12 cm) miaraka amin'ny lanceolate mitongilana kely somary mivadika, ahintsana ahitra;
Ny voankazo misy tsotsotra kely eo amin'ny tsorakazo lava lava midina mankany amin'ny tany rehefa mamony;
Mamboly zavamaniry iray, zavamaniry iray ahafahana mamorona voninkazo 100 isan-taona;
Efa ela ny vanim-potoanan'ny voninkazo;
Mandritra ny vanim-potoana fitsaharana, dia mamela ny ravina.
Ny karazam-borona maoderina indrindra dia avy amin'ireo sikam-piaramanidina persianina (C. persicum), izay misy ny sikamamenana (Cyclamen), fianakaviana Primordias (Primulaceae).
Zava-dehibe izany! Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza Eoropa dia mitranga mandritra ny vanim-potoana mafana. Amin'ny ririnina dia mijanona ny voninkazo. Ao amin'ny vakansy Persiana amin'ny fahavaratra.
Maro ny karazan-javamaniry natosika amin'ny voninkazo misy karazany isan-karazany: be dia be sy mavokely, miaraka amin'ny karazana voninkazo tsotra sy marefo, felam-boninkazo na marevaka, misy karazana loko isan-karazany - fotsy, volokano, volomparasy, mavokely, volomparasy, mena, kiriri, mainty mainty. Misy ihany koa ny fanangonana ny lokony roa (lamandy sy picotee).
Miankina amin'ny isam-bolana ny sokajy:
Standard (maxi) hatramin'ny 30 cm;
mena midi (midi) - hatramin'ny 22 cm;
tsy misy dikany (mini) - tsy mihoatra ny 15 cm.
Ny famokarana siklaôla dia matetika miseho amin'ny andian-karazany (zavamaniry mitovy loko isan-karazany) zavamaniry kely. Izy io dia mizara ho an'ny mixing mini sy patio mix, na dia mahita volo mamirapiratra sy avo loko misy zavamaniry misy loko samihafa karazana iray na maromaro.
Anisan'ireo andian-tantara malaza antsoina hoe cyclamen:
Manana voninkazo lehibe kokoa izy ireo, mihoatra ny 4 cm ny diamondra.
Help. Raha ny fitsipika, ny mpamokatra voa dia mametraka ny anaran'ilay andian-tsarimihetsika sy dika mitovy amin'ny anarana hoe "Cyclamen Mix", ohatra, Cyclamen Allure Mix 10/25. Ny tarehimarika dia manondro ny hamaroan'ny vilany (10 santimetatra) ary ny haavon'ny zavamaniry lehibe (25 santimetatra).
Ny sikiam-pivoaran'ny patio dia ahitana ny zavamaniry kely indrindra hatramin'ny 10 santimetatra avo lenta:
Zavamaniry kely voninkazo, palette fotsim-bary avy amin'ny fotsy mavokely amin'ny mena rehetra, mavokely, manga. Mamboly von September hatramin'ny Martsa-Aprily. Ny fiakaran'ny hafanana sasany dia tsy mitsambikina ary afaka maniry ny taona manontolo amin'ny fialana vetivety.
Azo jerena ato amin'ity lahatsoratra ity ny sary sy ny sarin'ireo karazam-borona malaza indrindra.
Ny fitsipika momba ny fambolena sy ny fitazonana ny zazakely dia tsy mitovy amin'ny fitsipiky ny fambolena havany.
Rehefa mamboly voa dia manaraka ny algorithm:
Ny voamaina tsy voatsabo dia mihosena anaty rano mafana mandritra ny andro;
Ny tany nolavahana dia natsipy tao anaty boaty kely na sombin-tsoroka maromaro miaraka amina drainage;
Ny ambioka dia mipetaka amin'ny toerany, eo amin'ny elanelana be mivaingana ary miparitaka amin'ny tany (5 mm) ny tany na ny vermiculite;
Ny boaty misy seza dia napetraka ao anaty toerana maizimaizina miaraka amin'ny hafanana tsy mihoatra ny 20 ° C;
Taorian'ny fisehoan'ny ravina 2-3 tena izy dia mipetraka ao anaty vilany ny zana-ketsa.
Ny vilany dia miorina eo atsinanana, avaratra atsinanana, ary andrefana, lavitra ny fitaovana fanamainana. Aza avela hitarika masoandro ny masoandro, ka hiteraka ny raviny.
Zava-dehibe izany! Tsy mamela ny fahalotoan'ny entona ny rivotra, rivotra vovoka, tsy ilaina ny mametraka azy ao an-dakozia, efitrano fifohana sigara.
Ho an'ny fampandrosoana sahaza ny zavamaniry, dia mitaky rano tsy mitongilana na tsy fahampian-tsakafo miaraka amin'ny PH asidra 5,5-6. Ny tany mafana dia mety amin'ny geraniums, voatabia, pepper (Terra Vitta, Florin, Klassman, Sturgeon).
Afaka miomana tsy misy fepetra ny fampiasana solika amin'ny fampiasana ny fomba rehetra:
Ny ravina sy ny landy mitovy, ny reniranon'ny renirano, ny hatsikana mivaingana;
ampahany iray amin'ny fasika, tapany roa amin'ny fangaro organika (tavoahangy, voaniho voanio, humus).
Ny tsy fitovian-tsakafo dia tsy mitovy amin'ny fikarakarana sikama tsy tapaka:
Mari-pana. Ny zavamaniry dia mitaky hafanana hafanana eo amin'ny 14-16 ° C. Hisy tranombakoka maotera ao anaty efitrano mafana loatra azo alaina, mba hametrahana mari-pamantarana mety tsara, eo anelanelan'ny rindrin'ny varavarankely.
Fisotroan. Mba hiarovana ireo zavamaniry tsy hihinana - mandany rano "ambany". Noho io tanjona io dia misy siramamy maromaro napetraka ao anaty ranom-boasary misy rano, izay misy ranon-damosina napetraka mba tsy hikorontana amin'ny rano. Nandritra ny voninkazo be dia be no nanondrahana rano tao amin'ny efitra fisakafoana 1 ora tao anatin'ny telo andro.
Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ravin-kazo maniry, ny hafanana ilaina (50-60%) dia mitazona amin'ny rivotra mitsoka manodidina ny vilany. Miaraka amin'ny fiantombohan'ny fofona manitra.
Trimming. Tsy ravana ny ravin'ny sikilamo, ary manala moramora na miandry mandra-pialany amin'ny tenany. Ny zana-kavoana manana voninkazo voadio dia tapaka miaraka amin'ny antsy maranitra maranitra eo amin'ny fotony.
Famahanana. Ao anatin'ny vanim-potoana mivoatra sy ny voninkazo, ny cyclamen dia omena herinandro roa isan-kerinandro miaraka amin'ireo vongan-dranomamy manerantany ho an'ny voninkazo mitenana bitika bitika (Agricola, Master, Biohumus, AVA).
Mialà amin'ny fotoana maharitra. Aorian'ny faran'ny voninkazo dia mihena ny rano, mihena ny sakafo. Ny vilany dia rakotra taratasy amam-bolo na manadio amin'ny toerana maizim-pito.
Transplant. Miaraka amin'ny endriky ny ravina kely eo amin'ny tuber, ny tuber dia nafindra tao anaty vilany vaovao iray ary iray metatra ny sakany 1-2 cm mihoatra noho ny teo aloha.
Anisan'ireo aretina mahazatra amin'ny fanodikodinana cyclamen:
Ny rhizoctonia rhizoctonia tsy misy rajako sy ny volony maitso;
gall root nematodes;
Ny biby mampidi-doza no tena mampidi-doza indrindra:
tsofa maromaro, sikilemana ary metaly claw;
Zava-dehibe izany! Ny fanafody famonoana bibikely dia ampiasaina amin'ny fitantanana bibikely (Aktar, Actellic, Fufanon). Miaraka amin'ny aretina mafy dia simba ny zavamaniry malemy.
Mihamaro isan-kerinandro ny famokarana masomboly amin'ny voa sy ny zavamaniry, Persiana - amin'ny fizarana ny tuber, Eoropeana miaraka amin'ny fanampian'ny zanakalahy klubashkov.
Rehefa misafidy fomba famafazana voa, dia tokony ho raisina an-tsaina fa saika ny fiovan'ny cyclamen rehetra. Noho izany, tsy afaka miasa ny voninkazo miaraka amin'ny endriky ny karazana voankazo samihafa. Mila mividy mikolokolo ao amin'ny magazay.
Na dia heverina ho mampalahelo aza io fomba fiasa io, dia manome vokatra tsara izany ary mitombo haingana ny voninkazo. Toy izao ny baiko:
Misy tsiranoka miaraka amin'ny tsimok'aretina maromaro dia maina;
Manapaha tapa-pila amin'ny maso;
Ny fihenam-bidy dia voadona miaraka amin'ny vovo-dronono;
Miparitaka eo amin'ny tany ny fambolena, fa tsy mipoitra mivantana;
Ny tranona dia napetraka ao anaty toerana maizim-borona na rakotra rakotra matevina mifono rivotra.
Rehefa manara-maso akaiky ny fikajiana ny fambolena zavamaniry. Eo amin'ny fisotroan-drano madinidinika kely dia maty ny vatomamy sy ny zavamaniry.
Toy ny sambokely amin'ny vanim-potoanan'ny voninkazo sy ny fitomboan'ny kolontsaina indostrialy.
Zavamaniry kely (25-30 cm), miaraka amin'ny voninkazo dimy mavokely manga, mavo, mena, mavo, fotsy.
Ny hatsaran-tarehy namboarina dia omena amin'ny lamosina mena.
Zavamaniry lehibe ao amin'ny fianakaviana Rhododendron.
Hazo maina na hazo madinika avy amin'ny fianakaviana dite.
Zavamaniry bitika kely misy raviny hatramin'ny 12 cm ny lavaka ary mirefy 20 cm ny haavony.
Mamboly eo am-piandohan'ny lohataona.
Ny famonoana cyclamens dia afaka mampifaly ireo mpamokarana be mpahalala. Amin'ny fikarakarana sahaza azy, dia hampifaly ny mason'ny hafa izy ireo, ary hanolotra faran'izay mahafinaritra ny tompony.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Famafazana voan-kafe "Cyclamen Mix": karazana malaza, fomba famolavolana azy ireo ary fikarakarana zavamaniry